amaqembu Agency zezingane "Stomper" - ithimba Animators, abalingisi, abapristi abenza imilingo, abaculi enze-up, bezithombe kanye nabantu abavelele abazokwazi ukuhlela hhayi nje iholidi, kodwa umbukwane ingane yakho.
Ngeke be bored! izingane Ungene phakathi kwezingane nabazali bazo.
Ngaphezu ukuzijabulisa egqamile arsenal yethu workshop engavamile, insipho Bubbles ukukhombisa, Igumbi umhlobiso amabhola akvagrim futhi isimanga okukhethekile polyglots abasha - ebambe imikhosi ngolimi okungelona lwakubo!
Kungani izingane uthando iholidi?
Eqinisweni, ungazange wacabanga yini lo mbuzo? Yiqiniso, leli holidi - imizwelo, futhi izingane efana plasticine - evundile ezinjalo! Kodwa kubalulekile ukuba "umbe" ezijulile. Iqiniso lokuthi kuze iminyaka 7, umsebenzi oyinhloko izingane - ukudlala. Kuyinto ngokusebenzisa le nokufunda kuyenzeka, ulwazi thina kanye nezwe. Ochwepheshe emaphathini izingane nhlangano bayakwazi lokhu futhi njalo ilungiselela isimiso somhlangano lokho bekungeke nje ukuzijabulisa, kodwa wakhulela, wafundisa insizwa usebenza kuthimba, ngabe itshalwe ukuqalekela lokusungula.
Izingane ezindadlana ukusebenza kakhulu akuyona alien. Kodwa kulokhu ufeza nezinye izinjongo eziningana. Ngokuvamile, ngemva kweminyaka engu-7, ingane isikhathi ukuqonda ngokuphelele ukuthi isikole umsebenzi kanye nemithwalo yemfanelo ehambisana esiphathiswe emahlombe encane. Ngakho-ke, amaqembu la izingane izingane nhlangano "Stomper" linikeza okuthile okukhethekile. Izinhlelo ukuthi musa nje ukufundisa, ukufundisa, khulula, kodwa futhi ukuze nginciphise ukucindezeleka, njengoba ibhekene namacala omuhle nethemba!
Izingane abahileleke ngokuqondile le nhlangano show. Bangaze nabathakathi abaqeqeshi, jugglers nabaculi. Usuke okuqinisekisiwe: izinkumbulo Sea Bright ayegcwele atnistressovaya yokwelapha, indlela yokudala. Uzokwazi ukuthola nesithombe-festival, njalo siqaphe izithombe zethu ezinhle kuwe.
Kungani abantu abaningi kangaka ufuna ukumema i nokuveza?
Yebo, ncamashi. Izinhlelo okuhlotshaniswa ukunyakaza, athandwa kakhulu kokubili kubantu abadala futhi phakathi "isizukulwane esisha". Movement - ekuphileni. Kanjani ukuba sikhumbule lokhu Axiom? Iqiniso lokuthi umsebenzi ngokomzimba kakhulu kuvusa ekusebenzeni kobuchopho, kusiza ekudambiseni ukucindezeleka engqondweni nasemzimbeni, futhi yebo, ithelela "lokusungula ukuluma."
Futhi ukuphela ... is ngokucophelela ngakho incazelo yesayensi kuyadingeka ukuze uhlele kube iholidi ngaphambi kokuba ingane? Mema nokuveza can nje ngoba ziyinto enkulu, hhayi kuphela izingane kodwa nakubazali bayo! Ngoba wonke umuntu ufuna ajabule!
Uma unemibuzo noma iziphakamiso, ungaxhumana nathi nganoma inombolo ohlwini kwi-website noma nge ifomu impendulo. Kodwa okokuqala, sincoma ukuthi uzijwayeze izithombe namavidiyo ethulwa kwi-website e igalari, ukuze wabona ngokucace bha indlela egqamile futhi esikoleni kungenzeka party yezingane. Ngokuqinisekile, uyobe othanda izikripthi zethu nezithombe, okuyinto Ungakha abadlali ejensi, noma ufuna ukuba uxhumane nathi nge imibono yabo. Ukuze ochwepheshe bethu, ayikho into engenakwenzeka. Ngaso sonke isikhathi sizama ukuhlangabezana nezifiso zakho.
amaqembu Agency zezingane "Stomper": ngeke -buthuntu, uyomshayela izandla zakhe Ukuvutha bubble!
Uhlu izinhlelo kanye nemininingwane
Lapho usuku igama inothi Xenia?
Christmas ukugubha amasiko
Indlela yokwenza ingane abangasoze balukhohlwa New Year
Muslin lomshado: indlela ukuhalalisela nalokho ukunikeza?
Iwebhusayithi Promotion Izihloko, Izihloko okuqhubekayo
River Nerskaya River eMoscow: incazelo, izici, izithombe
Ismail Sillakh: umsebenzi kanye biography
Umlingisi Denis Matrosov: Biography, empilweni yakho, i-Filmography